यो साता कुन राशिका लागि शुभ रहला ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल | राशिफल
June 24, 2021 NepstokLeaveaComment on यो साता कुन राशिका लागि शुभ रहला ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
मेष: यो हप्ता मेष रासी हुनेहरुको लागी घरयासी समस्याका बावाजुद चित्त प्रसन्न रहने छ , तपाईं आफ्ना सबै समस्याको समाधान पाउन सक्षम रहनु हुने छ । हप्ताको मध्य तिर परिस्थिती अनुकुल बन्नेछ । समुहिक कार्यमा स्पस्ट धारणा राखेर काम गर्नु पर्ला । नयाँ सम्बन्ध बनाउदा पुरानो सम्बन्धलाई पनि महत्व दिन नभुल्नु होला । नयाँ ब्यक्तीहरु सँग सम्बन्ध बिकास हुन सक्छ ।
वृष: रमाइलोमा अनावस्यक खर्च हुनेछ । खानपिनर साथीभाइसँगको काममा एवम मनोरञ्जनमा बढी समय बित्नेछ । स्वास्थ्यमा भने सुधार आउने तथा ऋणको भार कम हुनेछ । मावली पक्षबाट फाइदा एवम पशु चौयायाबाट लाभ हुनेछ । अरुको सहयोग मिल्नाले अधुरा कामहरु बन्नेछन् । साझेदारी व्यवसायमा नयाँ योजना बन्नेछ ।
मिथुन: यो साता मिथुन राशि हुनेहरूको लागी शनिको कारण मानसिक र आर्थिक कष्ट झेल्न पर्ने हुन सक्छ । आफ्नो स्वास्थ्य को विशेष ख्याल राख्नु पर्ला । पेट सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्नेछ । आम्दानीको तुलनामा खर्चको अधिकता हुन सक्छ । जमिन र निर्माण सँग जोडिएका कामहरूमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
कर्कट: साझेदारी लगानीमा फाइदा मिल्नेछ । नयाँ योजना बन्ने एवम पारिवारिक सहयोगले अधुरा काम बन्नेछ । साताको मध्यमा भने रोकावट एवम बाधाको सामना गर्नु पर्नेछ ।
सिंह: प्रतिस्पर्धा एवम खेलकुदमा विजय मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुने एवम विपक्षीसँग जित मिल्नेछ । प्रेममा प्रगति एवम वैवाहिक कुरा अघि बढ्नेछ । व्यावसायिक यात्रा हुने एवम लगानीमा फाइदा मिल्नेछ ।
कन्या: अध्ययनमा प्रगति देखिन्छ । कला संगीतमा रुचि जाने एवं सृजनामा प्रगति मिल्नेछ । सन्तानको सहयोग बढ्ने एवम मातृपक्षबाट धनको सहयोग मिल्नेछ । होटल एवम कृषि व्यवसायमा धन आर्जन हुनेछ । साताको मध्यमा भने वादविवाद हुन सक्ने एवम घर बाहिरको काममा प्रगति मिल्नेछ ।
तुला: मानसिक चिन्ता थपिनेछ । घरायसी सल्लाहन मिल्नाले आपसी विवाद बढ्नेछ । स्त्री पक्षसँग मनमुटाव एवम व्यर्थ झगडा हुनेछ । साताको मध्यमाभने व्यापारमा लाभ एवम व्यवसायबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ ।